SAMBAVA:Tonga nanokatra ny Festival de la Vanille ny Minisitra ny Fambolena sy fiompiana
samedi, 29 septembre 2018 09:53
Nisokafana ny alakamisy 27 septambra ity hetsika ara-kolotsaina izay aty amin'ny FARITRA SAVA ity, ka ny Minisitra ny Fambolena sy fiompiana Atoa RANDRIARIMANANA Harison no nanokatra izany tamin’ny fomba ofisialy.
Nandritra ny fandraisam-pitenenana no nilazany fa matetika zavatra ratsy no hafantaran’olona antsika fa raha vao miresaka lavanila dia zavatra tsara no hafantaran’izao tontolo izao, satria isika eto Madagasikara no voalohany amin’ny fanondranana izany maneran-tany.
Ny loza anefa tato anatin'ny roa taona tato dia hiarahantsika mahafantatra fa ireo avy any Etazonia any no manafatra ny ampahany betsaka amin’ny lavanila avy aty amintsika, ireo dia sarotiny amin’ny fampiasana ankizy tsy ampy taona nefa nisy nahita io zavatra mahasarotiny azy ireo io dia ankizy nampiasaina tamin’ity sehatra ity.
Ka io no ady lehibe ataontsika izao miaraka amin’ny mpiara miohombon’antoka OIT, fa ny angatahana amintsika kosa dia ahoana no atao hitazonana ny atsaran'ny vanila aty amintsika hoy ny Minisitry ny fambolena sy fiompiana hatrany.
Fa ny solombavambahoaka voafidy teto Sambava Atoa BEHAVANA Harivonjy, dit Zoky Vonjy, kosa dia nitaraina ny amin’ny fanapahana ny daty fiotazana ny vokatra izay matetika miteraka savorovoro ka mba niangavy rehefa raharaha momba ity vokatra hireharehanay ity dia mba ataova miainga avy aty hifotony fa tsy ambony latabatra ihany. Fa izahay kosa sahy milaza fa tena niharovana ny hatasaran'ny vokatra matoa tonga amin’ny vidiny izay 1 tapitrisa Ariary ny iray kilao, fa mba hamafiso ihany koa ny fomba fiarovana ny vokatra mba hitazonana ny hatsaran'ny vokatra hoy Atoa Minisitra.
Diabe namakivaky ny tanana no nohentina nisantarana izany ny 27 septambra io ary haharitra hatramin’ny rahampitso alahady 30 septambra izao ka hibahan-toerana amin’izany ny kolotsaina hoy ny Filohany Festival de la vanille Dr Marinjara Paul Edhino.